Muraayadaha Uller Muraayadaha leh xarkaha acetate iyo X-Polar optics - ULLER
SIYAASADDA PREMIUM EE KASTA OO DHAN
Dhamaan muraayadaha noogu shaqeeya waxaa soo saaray naqshadeeyayaal khabiir ah oo ka abuuraya baahiyo ay qabaan kooxdeenna ciyaartooyda xirfadleyda ah ee markaas muujineysa ka dibna waxaa lagu soo saaraa agabyada ugu wanaagsan ee warshadaha indhaha iyo qaab dhismeedka ugu fiican. Mid kasta oo ka mid ah muraayadahayaga muraayadaha ah ayaa soo maray illaa lixdan hannaan gacmeed kahor inta aan la isticmaalin qaabkeedii ugu dambeeyay, marka lagu daro gudbinta kontoroolka tayada adag iyo imtixaannada waxqabadka.
Hookipa Brown Kaftan / Madoow
Hookipa Brown Kaftan / Madoow 60.00 € 195.00 €
Hookipa Madoow / Madoow
Hookipa Madoow / Madoow 60.00 € 195.00 €
Xirfadlaha Cagaaran ee Hookipa / Madoow
Xirfadlaha Cagaaran ee Hookipa / Madoow 60.00 € 195.00 €
Hookipa Madoow / Cagaaran
Hookipa Madoow / Cagaaran 60.00 € 195.00 €
Dooxada Brown Tortoise / Brown
Dooxada Brown Tortoise / Brown 60.00 € 155.00 €
Dooxadda Dooxada Cagaaran / Madoow
Dooxadda Dooxada Cagaaran / Madoow 60.00 € 155.00 €
Dooxada Buluugga Dooxada / Madoow
Dooxada Buluugga Dooxada / Madoow 60.00 € 155.00 €
Dooxada Madoow / Buluug
Dooxada Madoow / Buluug 60.00 € 155.00 €
Sorto Green Tortoise / Madoow
Sorto Green Tortoise / Madoow 60.00 € 165.00 €
Soul Brown Tortoise / Buluug
Soul Brown Tortoise / Buluug 60.00 € 165.00 €
Soul Madow / Cagaaran
Soul Madow / Cagaaran 60.00 € 165.00 €
Soul Madow / Madoow
Soul Madow / Madoow 60.00 € 165.00 €
Alpine Madow / Madoow
Alpine Madow / Madoow 60.00 € 175.00 €
Alpine Madow / Buluug
Alpine Madow / Buluug 60.00 € 175.00 €
Ushuaia Madow / Cagaaran
Ushuaia Madow / Cagaaran 60.00 € 185.00 €
Xannuunka Buluuga ah Ushuaia / Madow
Xannuunka Buluuga ah Ushuaia / Madow 60.00 € 185.00 €
Ushuaia Madow / Madoow
Ushuaia Madow / Madoow 60.00 € 185.00 €
Ushuaia Kawaar Gorgor / bunni
Ushuaia Kawaar Gorgor / bunni 60.00 € 185.00 €
Ushuaia Madow / Buluug
Ushuaia Madow / Buluug 60.00 € 185.00 €
MAGACYADA LAGU SAMEEYEY PREMIUM CELUSOSE ACETATE
Frame ka sameysan acetates cellulose ugu fiican. Waxaan si taxaddar leh u xulanaa nooc kasta oo acetate ah si aan u hubinno in natiijada ay ugu fiicnaan doonto. Qaab kasta waxaa loo sameeyaa loona habeeyay gacanta si farshaxan gebi ahaanba farshaxanimo ah oo ay adeegsadaan farshaxan yahanada, sidaa darteed waxay damaanad qaadayaan badeecad leh Premium ay ku dhammeysanayso si ka sareysa heerarka suuqa. Thanks to this, waxaan u beddelay muraayadaha qorraxda Uller® mid soosaaraya xaddiga ugu badan ee laga heli karo warshadaha indhaha.
QAYBAHA BIRTA MIDHAN.
Looxyadeennu waxay ka kooban yihiin qaybo bir ah oo iska caabiya oo ah kan ugu sarreeya iyo tayada ugu sarreeya. Fiilooyinka dhamaadka sare waa kuwo adag oo adag laakiin isla mar ahaantaana waxay leeyihiin dareen fiican oo jilicsan oo wadajir ah. Nidaamkeeda furitaanka iyo xidhitaanka fudud ayaa loogu talagalay in lagu fududeeyo raaxadaada laakiin isla markaa leh tayo aan lagaran karin oo ku siin doonta waxtarka waxqabadka ugu fiican.